Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop Qaybta 7 | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 7-aad)
Antonio L. Carter | | General, Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
Si loo dhammeeyo sadarkan Casharrada ku saabsan Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop, Waxaan dhammeyn doonnaa shaqadeena sawir-gacmeedka dijitaalka ah, hoos u dhigista aaladda aan jecel nahay, iyada oo siineysa faahfaahin heer sare ah haddii aan uga tagno oo keliya midabbada fidsan
Midabbada fidsan ayaa anfac noo yeelan kara munaasabado badan, maadaama ay ka sahlan yihiin in lagu soo saaro taageerooyin kala duwan inta ay sidooda ahaanayaan, ama in lagu daabaco taageerooyin kaladuwan oo kala duwan. Hooska ayaa na siiya fursad aan ku siino nolosha sawirka, qoto dheer, cabbirka. Aynu bilowno.
Si aan u bilowno ka shaqeynta hooska sawirkeena, waxaan adeegsaneynaa xulashada kanaalka aan sameynay, halkaasna waan ka xusi doonnaa. Gelitaankii hore ee laynkan Casharrada, Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 6aad) waxaan ku shaqeynaa midab qalab kala duwan oo ah Adobe Photoshop nooga tago Hadda waxaan bilaabi doonnaa inaan hoos u dhigno shaqadeena, iyo sida ku xusan gelitaanka aan kor kusoo sheegnay, waxaan ku barayaa laba farsamooyin kala duwan oo tan ah.
Hooska si wanaagsan loo sameeyay waxay ku dartaa nolol badan sawir, iyagoo ku daraya saameynta iftiinka, taas oo macnaheedu noqon karo guusha ama guuldarada sawirka. Adduunyada majaajilada tusaale ahaan, waxaan leenahay kartoonistayaal sida Scott McCloud ama Mike Allred, kuwaas oo si dhib yar u adeegsada hooska sawiradooda, iyo kuwa kale sida Mike Mignola ama Scott MacDaniels, Kuwaasoo u adeegsada hooska si ay sawirradooda u siiyaan shakhsiyad aad u tiro badan, iyagoo ka mid ah qodobbada tixraaca ee taageerayaasha. Gaar ahaan wanaagga Mignola Wuxuu ka dhigay astaamihiisa.
Kahor intaadan bilaabin hooska, waxaan kuu sheegayaa inaan kaaga tagay xirmo kale oo caday ah oo shaashad ah oo lagala soo bixi karo oo la socda dhamaadka casharkaan, oo ay la socdaan PSD oo leh dhammaan macluumaadka ku saabsan sida farsamooyinka tutorial. Waxaan idinkaga tegayaa dhamaan macluumaadka la heli karo si khibradaada waxbarasho ay u noqoto mid tayeyn karta intii suurtagal ah. Aynu bilowno hooska.
1 Doorashada qalabka
2 Iskudhafka qalabka Gradient
3 Isku dhafka farsamooyinka
4 Dib u uruurinta
Waxaan u jiheysan doonnaa barta aaladda oo waxaan dooran doonaa qalabka Hoos kadhig, oo lala helay aaladda Soo bandhigid xad dhaaf ah iyo aaladda Isbuunyo. Kooxdan qalabka ah ayaa faa iido weyn noo yeelan doonta si aan u dhammeyno sawirrada, si kastaba ha noqotee, waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa ama waxay ku dhici kartaa xad-dhaaf ama codsiyo xun oo qalab ah.
Waxaan dooran doonaa qalabka Hoos kadhig iyo gudaha qalabka xulashada qalabka taas oo ka soo baxda midigta xulashada xulashada, waxaan hoos u dhigi doonnaa soo-gaadhista 15% iyo baaxadda Hooska. Waxaan sidoo kale hubin doonaa in sanduuqa xulashada la xushay Ilaali codadka. Waxaan si taxaddar leh uxooganeynaa mar walbana tijaabineynaa bilowga, taas oo noo horseedi doonta hooska gudaha, oo ku saleysan wax badan oo ku saabsan mugdiga midabka salka midabka, kaas oo leh codsiyo madow iyo shaxanka sawirka.
Waxaan sidoo kale u isticmaali doonaa buraashyo kala duwan sida ku xusan cufka aan dooneyno inaan ku guuleysano, maadaama burushyada aan sidoo kale ku dhejineyno sawirka, in kasta oo ay tahay inaan aad uga taxaddarno arrintan, maaddaama qaabab si qaldan loo adeegsaday ay abuuri karaan saameyn taban qeybta ugu dambeysa ee sawirka , abuurista aagag si xad dhaaf ah loo baaraandego, taas oo sawirka siin doonta muuqaal xun.
Markaan dhammeyno codsashada hooska, waxaan kugula talinayaa haddii aan rabno inaan jilcino natiijada, doorto qalabka Baadho oo ka mid ah Qalab oo ku dhaji dhammaan hooska, si looga dhigo midabbada midabku mid jilicsan, oo lagu gaaro dhameystir wanaagsan.
Sawirka waxaad ku arki kartaa farqiga u dhexeeya sawir dhammaystiran bilaa cillad la'aan ama aan lahayn. Baadhka sida Qalabka soo-gaadhista, waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho xakameyn iyo cabir.
Iskudhafka qalabka Gradient
Farsamadan ayaa ah mid aad u fudud in la adeegsado kana dhaqso badan tii hore, waxayna ku guuleysan kartaa hooska dabiiciga ah iyadoo awood u leh inay adeegsato noocyada nalka iyo hooska kala duwan marka loo isticmaalo xulashada kanaalka in aan sameynay, iyo in sida aad ogaan doontidba, ay si weyn u anfacayaan marka ay ka shaqeynayaan sawirka, taas oo noo oggolaaneysa inaan si buuxda u xakameyno qaybaha kala duwan midabayn Sawir gacmeed, iyada oo aan loo baahnayn in loo adeegsado kheyraadka lagu sameeyo iyada oo loo marayo kooxo lakabyo ah, taas oo marka laga reebo rar badan oo culeyska feylku sida muuqata, sidoo kale waxay nagu adkeyneysaa inaan socodka shaqada. Sidan oo keliya waa inaan nuqul ka sameysnaa lakabka sawirka, tagnaa kanaallada oo mar labaad ayaan si buuxda gacanta ugu hayn doonnaa walxaha midabaynta ee sawirka. Raaxo ayaa soo socota. Si aad u bilowdo hooska qalabka Degan, waxaan aadi doonnaa xulashada kanaalka oo aan dooran doonnaa kanaalka aan u yeernay Jirka, ka dibna qalabkii horay loo doortay, waxaan aadi doonnaa baararka ikhtiyaarrada qalabka kore oo guji daaqadda xulashada midabada Degan in la doorto wax kasta Midabka Hore + Transparent. Tan awgeed waa inaan midab ku helnaa Frontal midabka madow, si loo abuuro fawdo ka baxaysa mugdi ilaa hufnaan. Waxaan sidoo kale hoos u dhigi doonaa Furfurnaan at 10%, tan iyo hadaan rabno mugdi waa inaan siino labo baasas oo dheeri ah ama wixii aan dooneyno ilaa aan ka helno midabka aan dooneyno. Nooca sawirka yar yar Degan oo ku yaal Bsoo diyaariyeen fursadaha qalab ka sarreeya, waxaan ku doorannaa Toosan Gradient, oo hadda waxaan guda galaynaa xulitaankii aan dooranay waxaanan bilaabaynaa inaan kuxirno aaladda cusub Si aad u hadhdo adoo adeegsanaya qalabka Degan Kaliya waa inaan dooranaa mid ka mid ah xulashada kanaalka ka dibna guji gudaha xulashada oo aan ku jiidno meel, si aan u fahamno sida qalabku u shaqeeyo. Waxaan dooran doonaa nooc ka mid ah Degan iyo madmadow marka loo eego shuruudaha shaqsiyadeed.
Isku dhafka farsamooyinka
Waxa aan halkan ku soo jeedinayo ayaa ah inaad tijaabiso. Markaad sameyso tutorial oo waxaad bilaabeysaa inaad gacanta ku dhigto kooxda qalabka Exposure iyo aaladda Degan de Adobe Photoshop, waxaad isku dari kartaa labada farsamood isla sawirka, adoo si guud u xakameynaya waxa la galiyay.
Dib u uruurinta
Arrintan tutorial oo ka kooban 7 qaybood, waxaan baranay in lagu sawiro qalinkeena ama sawir gacmeedka gacanta ku haysta sida saxda ah, in loo nadiifiyo sawirka, loo calaamadiyo aaladaha Burush iyo Qalin, a Sawir un Farshaxanka, si aad u isticmaasho qalabka Sixir wand, qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya Kanaalada iyo Lakabyada, in la sameeyo Xulista Kanaalka, si aad ugu isticmaasho xulashadaas midabayn iyo hooska, si loogu isticmaalo Qalabka Loop Magnetic, si loogu isticmaalo aaladda hagaajinta Sawirka Hue / Saturation, si aad u isticmaasho aaladda Buuxi, si aad u isticmaasho Adobe Kuler si aad u hesho gamuts iyo nidaamyo midab leh, si aad uga soo dejiso gamuts midabyada Kuler, si aad ugu shubto gamutska laga soo dejiyey Adobe Kuler oo ku yaal Palette Muunadaha, in lagu hadho iyadoo la adeegsanayo kooxda qalabka Bandhig laga keenay barta aaladda Adobe Photoshop ama qalabka Degan.
Waxaan rajaynayaa inaad jeceshahay oo haddii aad leedahay nooc shaki ama dhibaato ah, ii soo sheeg, sidoo kale haddii aad jeceshahay iyo in kale, haddii aad wax hagaajin lahayd ama waxaad rabto inaad igala hadasho. Hadaad jeceshahay inaan abuuro a tutorial Kaliya waa inaad tiraahdaa. Qoraallada mustaqbalka, wuxuu sameyn doonaa hal sawir oo keliya Qalabka xulashada Adobe Photoshop.
Halkan waxaad ku haysaa faylka RAR ee la soo dejin karo: https://www.mediafire.com/?8ed044o84kj3mpm
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 7-aad)
George Andrew dijo
Muxuu yahay magaca sawirkaasi, fadlan i caawi oo ii sheeg
Ku jawaab joorge andres
12 Boodhadh Hal Abuurnimo Ah Oo Kuu Dhiirigalin Doona
Muhiimadda warbixin kooban ee naqshadeynta (I)